Hetsika tetsy amin’ny “13 mey”: nohafahan’ny fitsarana izy enin-dahy avy amin’ny K25 | NewsMada
Hetsika tetsy amin’ny “13 mey”: nohafahan’ny fitsarana izy enin-dahy avy amin’ny K25
Tsy niandry ela. Niakatra fitsarana avy hatrany tetsy Anosy, omaly ireo tovolahy miisa fito, mpanohana ny K25, naiditra vonjimaika am-ponja, ny faran’ny herinandro teo. Nohafahana noho ny fisalasalana ny enina raha sazy mihantona herintaona an-tranomaizina kosa ny iray amin’izy ireo.
Tsiahivina fa nosamborin’ny Emmo/Reg, ny faran’ny herinandro teo, noho ilay hetsika nataon’ny K25 teny Analakely sy ny manodidina izy fito ireo. Nifanjevo nandritra ny tontolo andro ny roa tonta. Nandeha avokoa ny daroka lakrimozena sy ny tora-bato ary koa ny fanapoahana Cocktail Molotov sy ny nahitana izany teny ambany Arcade. Tsy afa-bela tamin’izany ireto andiana tanora ireto ka nohazonina sy nohadihadiana teny amin’ny zandary Fiadanana sy Ankadilalana.
Antso avo nataon’ny kandidà Ravalomanana
Niakatra fampanoavana avy eo ary naiditra vonjimaika am-ponja (MD) ary izao afaka nody soa aman-tsara any Tsiaroanomandidy izao ny sasany amin’izy ireo.
Nialohavan’ny antso avo sy ny fitakian’ny kandidà Ravalomanana koa anefa izao fanafahana azy ireo izao. Navoitrany ny tokony hampitsaharana ny fanenjehana sy fisamborana ary koa ny hamoahana ireo notazonina am-ponja noho ny hevitra tsy mitovy tamin’ny fifidianana.